Dayax-gacmeedka: maxay yihiin, sidee loo aasaasay maxaase ka dhalan kara | Saadaasha Shabakadda
Xaqiiqdii waligaa ma maqashay monsoons. Ereygan wuxuu ka yimid ereyga Carabiga mausim y macnaheedu waa xilli. Magaca noocan ah waxaa loola jeedaa xilliga ay dabeyluhu ku rogmadaan baddaha u dhexeeya Carabiya iyo Hindiya. Dib u noqoshada dabayshaas iyo isbeddelada xilliyeed waxay sababaan roobab badan oo ka da'a gobollada leh hawo kulul oo qoyan. Roobabkan culus waxay geystaan ​​waxyeelo iyo masiibooyin baaxad weyn leh.
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa wax walboo aad ubaahantahay inaad ka ogaato mowliidyada, astaamahooda iyo goorta ay dhacayaan.
1 Waa maxay monsoons
3 Noocyada monsoons
4 Dhibaatooyinka waxyeelada leh
Waa maxay monsoons
Waxaan dhihi karnaa monsoons-ka Iyagu waa isbeddello waaweyn oo dabayluhu ku leeyihiin arrin jihada ah oo ka dhigaysa inay u xoogaystaan ​​dhanka gobol. IYOKala duwanaanshahan isbeddelka jihada dabaysha waxay kuxirantahay xilliga sanadka. Tani waa sida aan ula macaamilno isbeddelada xilliyeed ee mas'uulka ka ah roobab badan oo ka da'a gobollada leh hawo kulul oo qoyan.
Meelaha sida caadiga ah looga arko monsoons waa Koonfurta iyo Koonfur-bari Aasiya. Waxay sidoo kale ka dhici karaan meelaha kale ee adduunka sida Australia, Galbeedka Afrika iyo xitaa Ameerika.
Haddii aan u falanqeyno dayax-gacmeedka si ballaadhan oo qoto dheer, waxaan dhihi karnaa waxay sabab u yihiin saameyn kuleyl ah oo ay sababtay kala duwanaanshaha jira ee u dhexeeya kululaynta dhul ballaaran iyo bad. Markaan tagno kuleylaha waxaan arki karnaa in dabeylaha ay keeneen xoogaa qoyaan ah isla markaana ka dhigayaan xilliyada qalalan. Waxaa jira dhowr nidaam monsoon on meeraha. Xilliyada xilli-goobeedyadan ay dhacaan inta badan way kala duwan yihiin. Tusaale tan waxaan ku aragnaa waqooyiga Australia. Aaggan, xilliga monsoonku wuxuu soconayaa Disembar ilaa Maarso.
Dhinaca kale, aagga Hindiya iyo Koonfur-bari Aasiya waxaan ku leenahay xilliyada xagaaga iyo kuwa jiilaalka, kuwaas oo si weyn u saameeya cimilada. Dayax-gacmeedyadan ayaa ka dhashay kala duwanaanshaha heerkulka ka jira dhulka iyo badda. Heerkulkan ayaa ku kala duwan ficilka shucaaca qoraxda.
Waxaan ku falanqeyneynaa si faahfaahsan oo faahfaahsan waa maxay sababaha ugu waaweyn ee sameeya maansooyinka. Sidii aan horay u soo sheegnay, waa kala duwanaansho heerkulka dhulka iyo badda u dhexeeya kuleylka ay bixiso shucaaca qoraxda. Dhulka iyo biyaha ku jira badaha labaduba waxay mas'uul ka yihiin dhuuqida kuleyl badan laakiin siyaabo kala duwan. Habka loo nuugo kuleylka waxay kuxirantahay midabka dusha kasta. Inta lagu jiro xilliga diirimaadka, dhulka dushiisa ayaa awood u leh inuu si ka dhaqso badan biyaha u kululaado. Tani waxay sababtaa xarun cadaadis hoose oo dhulka ah iyo xarun cadaadis sare oo badda ah.
Marka la tixgeliyo dhaq dhaqaaqa dabaysha, waxaan arki karnaa in dabayluhu ka kala wareegayaan meelaha ay jiraan culeys weyn iyo halka ay ku yar tahay cadaadiska. Farqiga u dhexeeya dhulka iyo biyaha waxaa loo yaqaannaa kala-qaadidda cadaadiska. Waxay kuxirantahay qiimaha wejiga cadaadiska, xawaaraha ay dabayshu kaga bixi doonto aagga cadaadiska ugu sareeya kan ugu hooseeya ayaa dhakhso badan. Tani waxay keeneysaa dabeylo xawaare sare leh. Sidaa darteed, waxaan sidoo kale leenahay duufaan ka xun.
Xaaladaha oo dhan, wax kastoo ay yihiin nidaamka monsoon, dabeyluhu waxay ka soo kacaan badda halkaas oo ay ka muuqdaan astaamo waaweyn oo ku aaddan dhulka diirran ee ay ku yar tahay cadaadiska. Dhaqdhaqaaqan dabayshu waxay keentaa qadar badan oo qoyaan ah oo ka yimaada badda si loo jiido. Tani waa sida roobab badan oo isdaba joog ahi u soo baxaan tan iyo markii hawada qoyan ay soo baxdo ka dibna badda ku soo noqoto. Kadibna wuxuu kusii nagaanayaa dhulka dushiisa wuuna qaboobaa oo wuxuu yareeyaa awooda uu biyaha ku heysto.
Waxaan ku kala sooci karnaa monsoons kala duwan oo ku saleysan sababaha ugu waaweyn. Farsamooyinka ugu waaweyn ee ka kooban noocyada kala duwan ee monsoons waa sida soo socota:
Farqiga u dhexeeya kuleylka iyo qaboojinta ka jira dhulka iyo biyaha dhexdooda.
Leexashada dabaysha. Sababtoo ah dabayshu waa inay safarto masaafo dheer waxaa saameeya iyada saamaynta coriolis. Saameyntani waxay keenaysaa wareegga dhulku inuu sababo dabaylaha woqooyiga woqooyi inay u dhaqaaqaan dhanka midig iyo inay u dhaqaaqaan dhanka bidix ee koonfuurta koonfureed. Waxaa la mid ah mawjadaha badda.
Kuleylka iyo isdhaafsiga tamarta Maxaa dhaca markay biyuhu isu beddelaan dareere iyo gaseous una beddelaan xaalad dareere sidoo kale waxay siisaa tamar ku filan oo lagu abuuro monsoon.
Waxaan si fiican u ognahay in xilliyada Aasiya ay yihiin kuwa ugu caansan adduunka. Haddii aan koonfur aadno, xilliga monsoonku wuxuu soconayaa bilaha Abriil ilaa Sebtember. Aaggan dhulkeenna ka mid ah waa inaan ku xisaabtamnaa in shucaaca qoraxda uu si gaabis ah hoos ugu dhacayo bilaha xagaaga. Tani waxay ka dhigan tahay in falaadhaha qorraxda ay ku yimaadaan qaab aad u janjeera, oo kululaada dhulka dushiisa wax yar. Sidan oo kale, hawo kulul ayaa kor u kacda waxayna abuurtaa aag culeyskiisu hooseeyo bartamaha Aasiya. Dhanka kale, biyaha Badweynta Hindiya ayaa wali yara qabow waana isha laga helo aagagga cadaadiska badan.
Haddii aan isku darno aagga cadaadiska hoose ee Bartamaha Aasiya iyo aagga cadaadiska sarreeya ee Badweynta Hindiya, waxaan leenahay is biirsaday kaamil ah si loo abuuro monsoon. Haa waa inaad tiraahdaa taas Aasiya qaar badan oo ka mid ah hawlaheeda dhaqaale waxay ku tiirsan yihiin xilliga monsoon. Waa in aynaan iloobin in roobku u wanaagsan yahay dalagga.
Dhibaatooyinka waxyeelada leh
Mid ka mid ah saameynta tooska ah ee xilli-xilliyeedku waa roobab badan. Maaddaama heerkulka heer kulkiisu sareeyo uu jiro, roobab mahiigaan ah ayaa la sameeyaa kuwaas oo horseeda daadad iyo dhiiqo dhiiqo kuwaas oo inta badan mas'uul ka ah burburka dhismayaasha magaalooyinka iyo miyiga Dhibaatooyinkaasi waxay sidoo kale sababaan dhimashada dadka.
Sida la filayo, Dayax-gacmeedyadu sidoo kale waxay leeyihiin dhinac wanaagsan. Waana in badan oo ka mid ah aagga Aasiya ay leeyihiin dhaqdhaqaaqyadooda dhaqaale ee ku saleysan xilliga monsoon. Beeraleydu waxay ku tiirsan yihiin roobabka monsoon ee kobaca bariiska. Waxa kale oo ay ka faa'iideysataa kuwa beera dhirta shaaha iyo biyo-mareennada dib loo cusbooneysiiyo.
Waxaan rajaynayaa in macluumaadkan aad waxbadan kaga baran karto monsoons-ka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Maalin joog